accessiBe: Kushandisa Artificial Intelligence Kugadzirisa Saiti Kuwanikwa | Martech Zone
accessiBe: Uchishandisa Artificial Intelligence Kugadzirisa Saiti Kuwanikwa
Svondo, Kukadzi 21, 2021 Chipiri, February 23, 2021 Douglas Karr
Nepo mirau yekuwanikwa kwenzvimbo yave iripo kwemakore, makambani ave kunonoka kupindura. Ini handitende kuti inyaya yekunzwira tsitsi kana kunzwira tsitsi kudivi remakambani… ndinotenda zvechokwadi kuti makambani ari kungonetseka kuenderera.
Somuenzaniso, Martech Zone chinzvimbo chakashata kuti chiwanikwe. Nekufamba kwenguva, ndanga ndichishanda kuti ndivandudze ese kukodha, dhizaini, uye metadata inodikanwa… asi ini handikwanise kuenderana nekungochengeta zvemukati zviripo uye nekushambadzira nguva dzose. Ini handina mari kana vashandi kuti ndigare ndiri pamusoro pezvose zvandinoda kutove… Ndiri kungoita nepandinogona napo.
Ini handitende kuti ndini ndakasarudzika pano ... zvirokwazvo manhamba ari kushamisika kana iwe uchiongorora webhu uye kuitiswa kwayo kwenzvimbo dzekupinda:
Kuongororwa kwemapeji epamba emamirioni epamusoro pawebhu kunofungidzira kuti chete muzana vanosangana nematanho anoshandiswa zvakanyanya ekuwanika.
Chii chinonzi kuwanika? Ndeapi Iwo Maitiro?
Webhu Zvemukati Zvekuwanika Nongedzo (WCAG) tsanangura maitiro ekuita kuti zvemukati wedhijitari zviwanikwe kune vanhu vakaremara. Kuwanika kunosanganisira kuremara kwakasiyana siyana:
zvekuona nemeso Kuremara - inosanganisira izere kana kusasarura bofu, kupofomara kwemavara, uye kugona kuona kwakasarudzika zvinhu zvinopesana.
Kuremara kwekuongorora - inosanganisira kuzara kana kukwana matsi.
Kuremara kwemuviri - inosanganisira kugona kushamwaridzana neyakajairika yedhijitari kuburikidza nehardware zvimwe zvisiri zvakajairika mushandisi zvishandiso sekhibhodi kana mbeva.
Kuremara kwekutaura - inosanganisira kugona kutaurirana neye digital diidhi kuburikidza nekutaura. Vanhu vakaremara vanogona kunge vaine zvipingaidzo zvekutaura zvinopesana nehurongwa hwazvino kana kutadza kugona kutaura zvachose uye zvinoda rumwe rudzi rwevashandisi.
Kuremara kwekuziva - mamiriro kana kukanganiswa kunodzivisa maitiro emunhu epfungwa, kusanganisira ndangariro, kutarisisa, kana kunzwisisa.
Kuremara kwemitauro - inosanganisira zvese mitauro nematambudziko.
Kuremara kudzidza - inosanganisira kugona kufamba nenzira kwayo uye nekuchengetedza ruzivo.
Kuremara kwehutano - inosanganisira kugona kusangana newebhusaiti pasina kukanganiswa nezviri mukati. Mienzaniso inogona kunge iri zviratidzo zvinokonzeresa kubatwa.
Ndezvipi Zvikamu zveDhijitari Midhiya Inosanganisa Kuwanika?
Kuwanika hachisi chinhu chimwe chete, mubatanidzwa wepamberi-pekupedzisira mushandisi interface dhizaini uye neruzivo rwunoratidzwa:
Zvemukati Management Sisitimu - mapuratifomu anoshandiswa kugadzira zviitiko zvevashandisi. Aya mapuratifomu anofanirwa kugadzirisa sarudzo dzekuwanika.
gutsikana - ruzivo irworwo peji rewebhu kana webhu kunyorera, kusanganisira zvinyorwa, mifananidzo, uye ruzha pamwe neiyo kodhi kana markup inotsanangura zvese chimiro uye mharidzo.
Mushandisi-MaAgents - iyo interface inoshandiswa kusangana nezviri mukati. Izvi zvinosanganisira mabhurawuza, kunyorera, uye vatambi venhau.
Inobatsira Technology - screen maverengi, mamwe mabhatibhodi, switch, uye software yekuvheneka iyo vanhu vakaremara vanoshandisa kushamwaridzana nemushandisi mushandisi.
Maturusi ekuongorora - dandemutande kuwanika kwekuongorora maturusi, HTML anoshanda, CSS anoshanda, anopa mhinduro kukambani nezvekuvandudza kugona kwenzvimbo uye nezinga rako rekuteerera.
AccessiBe: Kubatanidza AI yekuwanika
Artificial Intelligence (AI) iri kuratidza kuve ichibatsira zvakanyanya munzira dzataisatarisira ... uye kugona kuwana ikozvino ndomumwe wavo. accessiBe inosanganisa zvikumbiro zviviri izvo pamwechete zvinowana kuzadzikiswa kuzere:
An kuwanika interface yeese maUI uye dhizaini-inoenderana-dhizaini.
An AI-yakafambiswa kumashure kwekugadzirisa nekubata izvo zvakanyanya kuomarara zvinodiwa - optimization ye screen-vaverengi uye yekufambisa keyboard.
Heino pfupiso vhidhiyo:
pasina accessiBe, iyo nzira yewebhu yekuwanika kugadziriswa kunoitwa nemaoko. Izvi zvinotora mavhiki uye zvinotora makumi ezviuru zvemadhora. Asi zvinonyanya kutarisisa nezve kugadzirisa manyorerwo ndezvekuti kana zvapera, zvishoma nezvishoma zvinokanganisika nekuda kwebrowser, CMS, uyezve, webhusaiti inogadziridza. Mukati memwedzi, chirongwa chitsva chinodiwa.
ne accessiBe, maitiro acho ari nyore kwazvo:
Iyo yekuwanika interface inowanikwa ipapo pawebhusaiti yako.
accessiBeAI inotanga kuongorora uye kuongorora webhusaiti yako.
Mune anosvika maawa makumi mana nemasere, webhusaiti yako inowanikwa uye inoenderana neWCAG 48, ADA Musoro III, Chikamu 2.1, uye EAA / EN 508.
Maawa ese makumi maviri nemana, iyo AI inotsvaga zvinyorwa zvitsva uye zvakagadziridzwa kugadzirisa.
Kuburitsa zviuru zvemadhora kakawanda pagore hachisi chinhu chinowanikwa nemabhizinesi mazhinji. Nekuita kuti webhu ishandike isingashande, inokwanisika, uye ichiramba ichichengetwa - accessiBe chinja mutambo.
accessiBe inopawo a Litigation Tsigira Package pasina mari yekuwedzera, kuitira kuti kutevedzera webhusaiti yako kupikiswe. Pamwe pamwe nekutarisisa kwavo, pasuru iyi inosanganisira kuongororwa kwehunyanzvi, mishumo, mepu yekuwanika, kutevedzera zvinyorwa zvinotsigira, hutungamiriri, nezvimwe.
Dzidza zvimwe Saina Kuti Uwane Mahara
Tags: acessibeADA Musoro IIIaichakagadzirwa njerekuwanikwa kwekunzwikakuremara kwekunzwikakugona kuwanikwakuziva huremakuwanika kwemitaurokuremara mumutaurokuwanikwa kwetsingahurema hwepfungwakuwanikwa mumuvirikuremara mumuviriChikamu 508kuwanika kwekutaurakuremara kwekutaurakuwanikwa kwekuonakuremara kwekuonawcagWCAG 2.1kuwanikwa kwewebhudandemutande zviripo zvekuwanika nhungamiro
Froala: Natsurudza Yako Platform Neiyo Yakazara-Inoratidzirwa WYSIWYG Yakapfuma Mavara Edhita
Kurwadzisa Kwandakaita Mukurumbira Wangu neSocial Media… Uye Zvaunofanira Kudzidza Kubva Pairi
Unofungei? kukanzura mhinduro